स्वस्थ रहन आजै, अहिल्यैबाट सुरु गर्नुहोस् यी व्यवहार – Health Post Nepal
२०७५ फागुन ६ गते १०:४१
स्वस्थ कसरी रहने ? तौल कसरी नियन्त्रण गर्ने ? पछिल्लो समय यो आममानिसको चासोको विषय बन्दै गएको छ । सबै मानिस स्वस्थ रहन र तौल सन्तुलनमा राख्न चाहन्छन् । चिकित्सकले पनि अधिकांश बिरामीलाई तौल नियन्त्रण गर्न सुझाब दिन्छन् । तर, कसरी गर्ने ? अधिकांश मानिसको टाउकोदुखाइको विषय यही हो ।
हो, आमचासो र आवश्यकताको विषय हो यो । र, यसको अचुक औषधि र उपाय पनि छैन । एक मात्र उपाय भनेको विनाकुनै छुट, विनाकुनै हेलचेक्य्राइँ, रत्तिभर झन्झट र अल्छी नमानी स्वस्थ आचरण र बानी–व्यवहारको सुरुवात आजै र अहिल्यैबाट गर्नु हो । स्वस्थ रहन नियमित अपनाउनुपर्ने केही प्रयोगसिद्ध साझा आचार–व्यवहारहरूलाई यहाँ औँल्याउने कोसिस गरिनेछ । गर्नुहोस्, आजैबाट, अहिल्यैबाट, निरन्तर गर्नुहोस्, विनाहैरानी, विनाआलस्य ।
१) प्रशस्त पानी पिउनुहोस् ।
आफ्नो दिनको सुरुवात मनतातो दुई गिलास पानी पिएर गर्नुहोस् ।
२) खानापछि आराम नगर्नुहोस्
खाना खाएपछि तुरुन्तै बेडमा नपल्टिनुहोस्, कुर्सीमा पनि नबस्नुहोस् । बरु एकछिन हिँड्नुहोस् । बाहिर मिल्दैन भने अफिसमै भए पनि या कोठाभित्रै भए पनि हिँड्नुहोस् ।
३) फाइबरयुक्त खाना खानुहोस्
धेरै मिठो, मसिनो र बाहिरको खानामा जोड नदिनुहोस् । घरमै बनाएर प्राकृतिक खाना खाने आदत बसाल्नुहोस् ।
४) नुन कम मात्रामा खानुहोस् ।
५) बिहान सबेरै उठ्नुहोस्
भनिन्छ, जो मानिस सूर्याेदयपूर्व नियमित उठ्ने गर्छ, उसको दिनचर्या पनि नियमित हुने गर्छ । सधैँ सूर्याेदयपूर्व उठ्नुहोस् र बिहान २० देखि ३० मिनेट नियमित व्यायाम गर्नुहोस् । कम्तीमा हप्तामा ५ दिन व्यायाम नछुटाउनुहोस् ।
६) एकाग्र रहनुहोस् ।
नियमित कम्तीमा ३० मिनेट एकाग्र रहेर श्वास–प्रश्वासमा ध्यान केन्द्रित गराउन सकियो भने धेरै खालका मानसिक तथा शारीरिक समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । यसले स्फूर्ति पनि बढाउँछ ।
७) सबैसँग घुलमिल हुनुहोस् ।
भनिन्छ, परिवार तथा साथीभाइ मानव जीवनका अभिन्न अंग हुन् । तिनीहरूसँग मित्रवत् व्यवहार राख्न सक्नुभयो भने सहज हुनेछ । कसैसँग अत्यन्तै आत्मीय पनि नहुनुहोस् र अत्यन्तै दूरी पनि नबढाउनुहोस्, सामान्य र मित्रवत् सम्बन्ध कायम राख्नुहोस् । अति आत्मीय या अति परीय दुवै हानिकारक छन् ।
८) ब्रेक लिनुहोस् ।
तपाईंले थाहै नपाई अर्थात् विभिन्न आवश्यकता र समस्यामा अल्झिँदाअल्झिँदै समय कटिरहेको हुन्छ । कहिलेकाहीँ लाग्न सक्छ, तपाईंले केही समयका लागि ब्रेक लिनुभयो भने सायद ठूलै प्रभाव पर्नेछ । तर, त्यो भ्रम मात्र हो । त्यसैले वर्षमा एकपटक भए पनि थोरै दिनका लागि कामबाट ब्रेक लिएर आफ्नो पेरिफेरीभन्दा अन्यत्र कतै गएर समय बिताउनुहोस् । आफ्नो नजिकको सदस्यलाई पनि सँगै लान सक्नुहुन्छ । यसले तपाईंलाई फरक अनुभूति दिन सक्नेछ ।